Sehatra vaovao manao izay hampety ny endrika sy fandaminana tanàna ho an’ireo eny ifotony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2015 5:04 GMT
Tazana avy eny an-tafotrano mitodika eny antokotanin'ny trano avo iray ao Kyiv, Okraina. Sary avy amin'i torange.us, CC-By 4.0.
Any amin'ny ankamaroan'ireo toerana an-tanandehibe ahitana efitrano ampolony samy manana ny mpanofany, ny fifandraisan'ny mpifanolobodirindrina dia vitan'ny ngonongonona “manao ahoana” any amin'ny solotohatra na fifampitenenana tsindraindray amin'ireo fako na fitoerana tsy mety ataon'ny fiara eo anoloan'ny vavahady. Ho fanatsarana izany toe-javatra izany dia misy ireo mpikatroka ao an-drenivohitr'i Okraina, Kyiv, namoaka seha-piarahamonina an-tserasera iray handrisihana ny mponina an-tanandehibe amin'ireo tranoavo ireny hanana fifandaminana manokana ho azy ireo tsirairay avy. Ny sehatra, nantsoina hoe “Zhyteli” (Mponina), dia mikendry ny hanome fitaovana hoan'ireo mponina an-tanandehibe hifandraisana amin'ny mpifanolobodirindrina aminy hananganana tontolom-piainana mahate-honina ao an-tanàna.
Mieritreritra izahay fa misy ny zavatra eo amin'ny fiainana tokony ho tsotra sy mora takatra, ary iray amin'izany ny fifandraisana amin'ny mpifanolobodirindrina aminao. Amin'ity Zhyteli ity ianareo dia tendry (clic) iray hatrany no manelanelana anao amin'ny mpifanolobodirindrina aminao. Ka dia azonao atao ny manao veloma hatreo ny fahanginana anaty solotohatra [fanakadrihana] sy ny mahafantatra ny mpifanolobodirindrina aminao manomboka anio!
“Indreo ny mpifanolobodirindrina. Andao atao tsaratsara kokoa ny fiainana.” Ny pejy fandraisana amin'ny habatranonkala no manasa ny mpiserasera hisoratra anarana amin'ny alalan'ny adiresin-trano onenany. Pikantsary avy amin'ny zhyteli.com.
Tsotra ny fomba fiasan'ilay sehatra: vantany vao misoratra anarana amin'ny alalan'ny adiresin-trano onenany ny mpiserasera, dia hitany avokoa ireo mpifanolobodirindrina aminy rehetra amin'ny tranobe efa nampiasa ny tolotra. Rehefa mipongatra avy any ny vondrom-piarahamonina antserasera iray, dia afaka mampiasa ny sehatra ho tahaka ifanakalozan-kevitra amin'ny lohahevitra maro samihafa mifandraika amin'ny tranobe [building] ny mpiserasera, miainga amin'ny fikarakarana isan'andro ka hatramin'ny saran'ny fanavaozan-trano goavangoavana tsy maintsy atao. Nampanantena ny mpanangana ny sehatra fa azo antoka ny fampidirana ny tahirinkevitrao ao amin'ny sehatra ary hiezaka ry zareo hitazona izany ho an-takonana hatrany, ary nilaza ry zareo fa hohamarinin-dry zareo ny mombamomba ny mpisera vaovao tafiditra raha mifanandrify amin'ny tahirinkevitra misy ao amin'ny monisipalite izany (amin'ny alalan'ny dosie tsy nomarihan-dry zareo loatra hoe inona ilay izy).
“Maro ireo tranobe fonenana ao Kyiv no efa dia mampahonena tokoa, ary tianay ny hanampy ny olona hifandamina amin'izany, hanatontosan'ny mponina mivory amin'ny alalan'ny aterineto ary angamba, mahita olona mpitarika amin'ny asam-panatsarana azy ireo sy hanangana vondron'ny mponina hitantana ireo tranobe,” hoy i Serhiy Savchuk, iray amin'ny mpiara-manorina ny tetikasa.
Na dia vao haingana aza no namoahana ny sehatra “Zhyteli”, dia efa nisy ampolony vitsivitsy ny mponina nisoratra anarana ao Kyiv (sy amin'ny tanàndehibe Okrainiana hafa), ary efa misy ny mponina amin'ny tranobe vitsivitsy efa manohy ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny haba-tranonkala. Isan'andro ny mpikarakara no manovana adiresin-trano vaovao, ary vantany vao misy trano iray vaovao tafiditra, dia mametraka afisy ao amin'ny tranobe [building] ihany koa ry zareo handrisihana ny mponina hisoratra anarana sy hanandrana ilay tolotra [na servisy] (afa-mamoaka afisy hoan'ny mpifanolobodirindrina ihany koa ny mpisera ao amin'ny haba-tranonkala). Manana pejy ao amin'ny Facebook sy ny VKontakte ihany koa ny sehatra hanatrarana izay mety ho mpiserasera hafa vaovao sy hampalaza ny hevitra fananganana fikambanana malalaka [maimaimpoana] hoan'ny rehetra.